भेगन साग पनीर | सडकको लागि एक जोडी
अक्टोबर 1, 2019
भारतीय खाना संसारकै सबैभन्दा स्वादिष्ट शाकाहारी विकल्पहरूको साथ एकको रूपमा परिचित छ। धनी मसला, उज्ज्वल र अद्भुत ताजा सामग्री, लामो-पकाएको खाना पकाउने तरिकाहरू, र खानाको उत्कटताले यो बिर्सन्छ कि मासु उनीहरूको सबै भन्दा राम्रो पकवानहरूमा समावेश हुँदैन।
यो साग पनीर एक शाकाहारी टेक हो, र एक महान, पनि! सापेक्षिक रूपमा पूरा गर्न को लागी सरल, र हार्दिक जब यो काम गरीन्छ, तपाईले भारतीय खाना पकाउँदा सरल परिष्करणको यो उदाहरण मनपर्नुहुनेछ!
समय समय20 मिनेट
कुक समय45 मिनेट
12 औंस अतिरिक्त फर्म टोफु
1 tablespoon पहेंलो मिसो पेस्ट
3 tablespoons कागतीको रस विभाजित, अधिक 1 चम्मच (5zest,2बाट3लेमनसम्म
3 tablespoons सब्जी तेल विभाजित
कोसर नुन र ताजा जमीन कालो मिर्च
6 औंस बदाम सोया, चामल, वा काजू दूध (2 /3कप; 170ML)
6 औंस फूलगोभी फ्लोरेट्स वा खुल्ला सनचोकस 170g; फूलगोभीको सानो टाउकोको 1 /3को बारेमा
4 मध्यम लौंग लसुन 20g को बारे मा, महीन बदाम
1 1 -इन्च ईन्व नोब अदरक (लगभग 20g, खुली र बारीक कीमा बनाइएको)
1 गर्न4हरियो वा रातो थाई खोर्सानी तपाइँको तताउने प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै, कण र महीन बदाम
1 चम्मच जमिन धनियाको दाना
1 चम्मच भुइँ जीरा
1 चम्मच जमीन पिरोध
1 अलैंची फली फट्यो
8 औंस परिपक्व पालक, यदि घुमाउरो छ भने उपलब्ध छ
8 औंस अरुगुला वा रायोको साग कडा रायोको हरियो काण्ड हटाईएको छ
टोफू "पनीर" को लागी: ओभन र्याकलाई केन्द्र स्थितिमा समायोजित गर्नुहोस् र ओभर 375 ° F (190 ° C) मा प्रिसियट गर्नुहोस्।
अधिक ओसिलोता हटाउन कागजी तौलिएहरू बीच टोफू दृढतापूर्वक प्रेस गर्नुहोस्।
1 1 /2– इन्च क्युबमा काट्नुहोस् र अलग राख्नुहोस्। एक मध्यम कचौरामा, हिसका सँगसँगै मिसो पेस्ट,2चम्मच निम्बूको रस, निम्बूको छाप, र 1 चम्मच
सीजन उदारतासँग नुन र मिर्चको साथ।
टोफू र कोटमा टस थप्नुहोस्।
एक पन्नी पंक्तिबद्ध रिम्ड बेकिंग शीटमा समान रूपमा टोफू फैलाउनुहोस्।
ओभनमा राख्नुहोस् र गोल्डन ब्राउन सम्मको बेक गर्नुहोस्, लगभग 20 मिनेटहरू। सास पन्नीको बिरुद्द अलि अँध्यारो हुन सक्छ; यो ठिक छ। टोफुलाई अलग सेट गर्नुहोस्।
यसै बीच, फूलगोभी प्यूरीका लागि: एक सानो सास प्यानमा अखरोटको दूध र फूलगोभी जोड्नुहोस्।
नुनको साथ सिजन र एक सिमरमा ल्याउनुहोस्।
फूलगोभी कोमल छ सम्म कुक, लगभग 10 मिनेट।
Pur hande मिश्रण एक ह्याण्ड ब्लेन्डर वा काउन्टरटप ब्लेन्डर प्रयोग गरी।
पालकको लागि: तातो2टेबलस्पून वनस्पति तेल एक ठूलो सॉस प्यानमा वा चम्किन नभएसम्म मध्यम तौलमा सॉसेयरमा तेल।
लसुन, अदुवा, र खोर्सानी जोड्नुहोस् र खाना पकाउँनुहोस्, सुगन्धित, सुगन्धित र हल्का खैरो नभएसम्म, 1 मिनेट को बारेमा।
धनिया, जीरा, हल्दी, र अलैंची पोड जोड्नुहोस् र खाना पकाउँनुहोस्, सुगन्धित नभएसम्म, 30 सेकेन्डको बारेमा।
पालक र अरुगुला वा रायोको साग एक पटकमा एक मुठ्ठी थर्काउनुहोस्, सागपात बढाउने र साग विल्टको रूपमा थप थप्नुहोस्।
तनाव कम गर्नुहोस् र खाना पकाउनुहोस्, कहिलेकाँहि स्ट्रिring्ग गर्नुहोस्, साग पूर्ण रूपमा विल्ट नभएसम्म, लगभग5मिनेटहरू।
फूलगोभी प्यूरीमा चलाउनुहोस् र साग धेरै कोमल नभएसम्म पकाउन जारी राख्नुहोस्, लगभग5मिनेट लामो।
टोफू क्यूब्समा चलाउनुहोस् र माध्यम बाट तताउनुहोस्।
बाँकी कागतीको रस, नुनको साथ मौसम मा चलाउनुहोस्, आवश्यक छ भने एक सानो पानी संग स्थिरता समायोजित, र सेवा।
श्रेणी: एशिया, इनपुट, खाद्य र पेय, भारत, मुख्य मार्ग, शाकाहारी टैग: खाना, भारतीय, व्यञ्जनहरु, साग पनीर
← Daube डी Boeuf Provençale
1 दिन कोपेनहेगनमा कसरी खर्च गर्ने →